MyanLearn | Educational Videos, ပညာရေး၊ သင်တန်း၊ အလုပ်ခွင်နှင့် အင်္ဂလိပ်စကား ဆောင်းပါးများ
ပိုမိုကောင်းမွန်၍ ပြည့်စုံသော App ကို သုံးပါ။
"ညှိနှိုင်းသဘောတူ လက်ခံမှုယူ" စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို Videoလေး နှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ။
"ရဲရင့်စွာ ဦးဆောင်ခြင်း" စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို Videoလေး နှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ။
" ဒေါ်လာ၁၀၀နဲ့ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း" စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို Videoလေး နှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ။
"အရောင်းပညာ လူတိုင်းနဲ့မကင်းကွာ" စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ။
"အသည်းကွဲခြင်း မှ အသည်းမကွဲခြင်းဆီသို့ "စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
The5Love Languages – The Secret to Love That Lasts စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
Man’s Search for Meaning စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
၁၉၄၆ခုနှစ်မှာ Viktor Frankl ရေးသားခဲ့တဲ့ Man’s Search for Meaning “ဘဝအဓိပ္ပါယ်ရှာဖွေခြင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဂျာမန်ဘာသာစကားနဲ့ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ စာရေးသူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပျောက်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ဘဝရှင်သန်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်ရှာပြီး ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။
Atomic Habits စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ် (Behavioral Science) မှ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း များကို အခြေခံပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီနဲ့အတူ အကျင့်ဆိုးများကို ပြုပြင်ပြီး အလေ့အကျင့် ကောင်းများ ဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲ ဆိုတာပါ ဖတ်ရှုခွင့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The Magic of Thinking Big စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
“ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျမယ် ” ဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုင်း ဘာပဲလုပ်လုပ် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မြင့်မြင့်မားမား အတွေးတွေ တွေးဖို့ ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာစေဖို့ ၊ အခုလက်ရှိထက် ကိုယ့်ဘဝ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုပြီး တိုးတက်လာစေဖို့ နေ့စဉ်ကျင့်ကြံနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေ ၊ နိယာမ သဘောတရားများစွာ နဲ့ ထားရှိအပ်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားများကို လမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။
Eat That Frog စာအုပ်အနှစ်ချုပ်လေးကို အောက်က Videoလေးနှိပ်ပြီး အစမ်းနားထောင်လိုက်ပါ
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Eat That Frog! စာအုပ်လေးဟာ နိုင်ငံတကာအရောင်းရဆုံး (The International Bestseller) စာရင်းဝင် စာအုပ်များထဲမှ တစ်အုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ အလုပ်တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပျင်းရိခြင်း၊ တက်ကြွမှုမရှိခြင်း ၊ အချိန်ဆွဲလုပ် ဆောင်တတ်ခြင်း စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုများ ၊ အကျင့်များကို အပြီးပိုင်စွန့်လွှတ်နိုင်အောင် ၊ အချိန်တိုအတွင်း အလုပ် များစွာ ပြီးမြောက်နိုင်အောင် နည်းလမ်းကောင်း ၂၁ နည်းကို ဥပမာများနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားဖော်ပြပေးထား တာကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
ဝါသနာ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှု
စီးပွားရေး နှင့် စာရင်းကိုင်
How to Win Friends and Influence People စာအုပ်အနှစ်ချုပ်
Self-Help Book အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ “How to Win Friends and Influence People” စာအုပ်လေးကို ဒေးလ်ကာနက်ဂျီရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံ အကျဆုံး သရရွတ်ကျင့်နည်း (Part2) | Youya Online Chinese
Youya Chinese Online Course
တရုတ်စာမှာ အသံထွက်မမှန်ရင် တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာမို့ ဆရာမနဲ့ လိုက်ကျင့်ကြည့်နော်.. ဒါကတော့ အပိုင်း ၂ ပါ။
အခြေခံ အကျဆုံး သရရွတ်ကျင့်နည်း (Part 1 ) | Youya Online Chinese
တရုတ်စာမှာ အသံထွက်မမှန်ရင် တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာမို့ ဆရာမနဲ့ လိုက်ကျင့်ကြည့်နော်..
တရုတ်စာကို အခြေခံကနေ စတင်လေ့လာချင်သူတွေအတွက် ဗီဒီယိုလေးပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနူန်း English Vocabulary Words in Burmese - 10 Ways to Say "I Like" | EDULISTIC
Edulistic English Channel
ဒီသင်ခန်းစာမှာ"I Like" ပြောနည်း ၁ဝမျိုးကို လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနူန်း English Vocabulary Words in Burmese: 21 Ways to Say Talk | EDULISTIC
Talk" ပြောနည်း ၂၁ မျိုးကို လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခေါ်အဝေါ်များ Vegetable Vocabulary | EDULISTIC
အရင်တစ်ပတ်က fruit vocabulary တွေကြည့်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာ vegetable vocabulary တွေကို လေ့လာကြရအောင်။
ဆောင်းရာသီအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနူန်း English Vocabulary in Burmese: Winter Words ❄️ | EDULISTIC
ဆောင်းရာသီ ရောက်ပြီဆိုတော့ ဆောင်းရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်။ ❄️
အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနူန်း English Euphemisms in Burmese | EDULISTIC
English မှာ တချို့စကားလုံးတွေက တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့အခါမှာ ရိုင်းသလိုဖြစ်သွားတတ်တာ ကြားလို့မကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနူန်း Words to Describe Personalities & Character | EDULISTIC
လူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ အရည်အသွေး ဖော်ပြပုံ adjectives (၇၇)မျိုးကို category (၈)ခုခွဲပြီးတော့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
MyanLearn is the first tuition search platform with tutor matching service in Myanmar. Get all the information for English, Japanese, Chinese, LCCI, ACCA, Accounting, Computer, အင်္ဂလိပ်စာ, အင်္ဂလိပ်စာစကားပြော, English Speaking, တရုတ်စာ, ဂျပန်စာ, စာရင်းကိုင်နှင့် ကွန်ပျူတာ အတန်းများ in Yangon and Mandalay. Request private tutors for languages and vocational skills. Now, you can learn and practice English conversation skills online using an interactive method. You can practice speaking English with Computer Bot which will help you improve your speaking skill. Learn English with context and examples, so that you will understand how to use it better. Memorize vocabularies effortlessly with gamified lessons to help you remember. With Myanlearn’s Speak English online course, improve your English forabetter future. Get Myanmar's best education application now!
အခန်းနံပါတ် ၇ အေ၊ တိုက်အမှတ် ၅၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊
Learn English Online Certification
MyanLearn နဲ့ အနီးကပ်လေး ရှိချင်ရင်..
Follow MyanLearn App Facebook Page
© Copyright 2021 by ပညာတတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်